Injineero Turki ah oo Qarax lagula beegsaday Duleedka magaalada Muqdisho – Kismaayo24 News Agency
by admin 6th November 2019 0105
Qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso ayaa maanta duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhaw Siinka Dheer waxaa lagula beegsaday gaadiid ay la socdeen Injineero Turki ah oo dhisaya laamiga isku xira Muqdisho iyo Afgooye.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in qaraxa lala damacsanaa Injineerada Turkida uu haleelay gaari ciidan oo ilaalo u ahaa Injineerada Turkiga ee ku howlan dhismaha ka socda Laamiga isku xira Afgooye iyo Muqdisho.
Ciidamo ilaalo u ahaa Injineerada Turkiga ayaa la sheegay in uu dhaawac kasoo gaaray qaraxa, mana jiro wax khasaaro ah oo qaraxaasi kasoo gaaray Injineerada Turkida ee laamiga dhismihiisa ku howlan,
Qaraxyo miino ayaa dhowr mar lala eegtay Injineerada Turkiga ee ku mashquulsan dhismaha laamiga isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye, waxaana inta badan qaraxyada ka dhaca laamigaasi sheegata kooxda Al Shabaab.
Akhriso:Dowlada Federaalka Soomaaliya oo goordhaw soo saartay Digniin cusub.
Ciidamada Itoobiya oo mas’uuliyiin caan ah iyo saraakiil ciidan ku xiray gobolka Gedo.
Faahfaahin dilal Xalay ka dhacay Muqdisho iyo Ceelasha Biyaha
Ahmed sudani 10th December 2017
Doorashada dadban ee dalka ka dhaceysa oo weji kale yeelatay (Warbixin)
admin 27th August 2016
Maxaadan ogeyn oo ka soo baxay kulan xasaasi ah oo dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo Eng Cabdixakiin Xaaji Cameey?
Tifaftiraha K24 4th March 2017